ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खाेजिएकाे खुलासा, कसरि खुल्यो रहस्य ? — Imandarmedia.com
ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खाेजिएकाे खुलासा, कसरि खुल्यो रहस्य ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, महाकाली र लिपुलेकलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकै कारण भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खोजेको कुलासा गरेका छन् । त्यो खेलमा नेपालका नेताहरू पनि लागेको उनको आरोप छ ।